Archive du 20170201
Vovonana Tsimialonjafy Fahavalony ny � extremiste � sy ny fahantrana
Tsy manam-pahavalo afa-tsy ny gaboraraka sy ny � extremiste � ary ny fahantrana ny Vononana Tsimialonjafy mifahatra amin�ny Soatoavina Repoblikanina tarihiko ankehitriny, hoy ny fanambarana nataon�ny filoha mpanorina azy, ny Dr Olivier Rabe Landry,
Tsy misy marina izay tsy hipoitra !
Aiza ho aiza ianao ry Jean ? Mila manohy ny resako nataoko omaly aho fa tsy afa-po ary mbola feno ny foko.
Depiote Ravoninjatovo Sahoby Handrotsahy orana artifisialy any Marovoay
Manao antso avo amin�ny fitondram-panjakana mahefa miainga any amin�ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina,
Filohan�ny UCTU Ahiana hiharan�ny hatezeram-bahoaka
Mivoatra hatrany ny fahasorenan�ny mpanjifan�ireo zotran�ny kaoperativa UCTU amin�ny afitsok�ireo mpamily sy mpanerany.
Fanamarinana anarana anaty lisi-pifidianana 2 hatramin�ny 5 isan�andro ny olona tonga
Tsy rototra ! Izay no azo ilazana azy raha mijery ny fanadihadiana natao isam-pokontany mikasika ny fahavitrihan�ny olom-pirenena hanamarina ny anaran�izy ireo ao anaty lisi-pifidianana hatreto.
TSENA ETSY ANOSIBE Hananganana "pavillon" vaovao miisa 40
Vinavinaina hampiditra vola hatrany amin�ny 1 miliara Ar any ho any ny tsenan�Anosibe amin�ity taona vaovao 2017 ity raha toa ka vita soa aman-tsara avokoa ny asa fanatsarana sy fanavaozana kasain�ny kaominina Antananarivo Renivohitra tanterahina ao an-toerana.
Velom-bolo indray a !
Vita marina ny fety sy ny fialantsasatra fa dia efa niverina an-kianja tokoa ny ankamaroan�ireo mpanao politika.